IMTIXAANADA SHAHAADIGA AH OO MAANTA PUNTLAND LOOGA FADHIISTAY – Somali Schools
20th May 2017 at 5:55 pm
Guddoomiyaha Barlamaanka dawladda Puntland, Axmed Cali, ayaa maanta daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee Dugsiyada Dhexe iyo Sare ee Puntland, isagoo ka daahfuray Dugsiga Sare ee Gambool, Garowe.
Imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland waxaa ka qayb galay Arday isugu jira wiilal iyo gabdho oo tiradooda dhan tahay 12,687, xarumaha lagu gelayo imtixaanaadkan tiradoodu waxay dhan tahay 85 xarunmood.
Sidoo kale waxaa imtixaanka kormeeraya 99 kormeere, iyadoo ay imtixaanka ilaalin doonaam mudada uu socdo 635 macallin oo kamid ah macaliinta Puntland.
Agaasimaha Xafiiska Imtixaanaadka Puntland Axmed Maxamed Warsame (Saahid) ayaa sheegay inay madaxda Puntland iyo madaxda wasaaradda waxbarashadu u kala safreen magaalooyinka waaweyn ee Puntland, halkaas oo ay si rasmi ah uga daahfureen intixaanka shahaadiga ee midaysan .
Axmed Saahid wuxuu sheegay inuu imtixaanku si nabad gelyo ah ku gaaray dhammaan gobolada Puntland islamarkaana ay Wasaaradda waxbarashadu aad uga taxadartay ilaalintiisa.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Maxamed Cabdulqaadir Cismaan ayaa maalin taariikhihi ah ku tilmaamay furitaanka imtixaaanka shahaadiga ee Puntland, isagoo qiray inay wasaaradda waxbarashada masuuliyad weyn iska saartay sidii imtixaan midaysan loo qaadi lahaa, taasoo ah guulaha ay ku dhaarato wasaaradda waxbarashada Puntland.
Guddoomiyaha Barlamaanka dowladda Puntland oo la hadlay Ardayda ayaa u sheegay inuu ka rajeynayo inay soo bandhigaan kalsoonidoodii aqooneed islamarkaana ay muujiyaan dadaal wanaagsan, wuxuuuna ugu duceeyay inay kaalin wanaagsan ka galaan imtixaanka.
Guddoomiyaha Barlamaanka ayaa ku booriyay Wasaaradda waxbarashada inay Ardayda kaalimaha sare gala ku abaal mariyaan fursado waxbarasho oo gudaha iyo dibada ah. Wuxuu ugu dambayn Ardayda ku booriyay inay waxbarashadooda sii wataan si ay mustaqbalka dhow u noqdaan hogaamiyayaasha dalka.
Dhinaca kale, Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxbarashadda iyo taclinta sare ee dawlada Puntland, Dr. Maxamed Cali Faarax, ayaa maanta magaalada Bosaso ku Daah-furay Imtixaanka Shahaadiga ah ee fasalka Afraad ee Dugsiga Sare iyo fasalka Sideedaad ee Dugsiga Hoose dhexe.
Munaasabada Imtixaanka lagu Daah-furay ayaa ka dhacay Dugsiga Raascasayr, Ee Boosaso waxaana ka qayb galay Maamulka gobolka Bari, Maamulka Degmada Bosaaso iyo bahda Waxbarashadda .
Ardayda ka qabgalysa imtaxaanka Ee Gobolada Puntland ayaa Tiradoodu ay gaaraysaa 12,687 Arday wiil iyo Gabdho isugu jira, waxaana Imtixaanku uu si rasmi ah uga wada bilowday 86 xarumood oo ku kala yaala sagaalka gobol ee Puntland ay ka kooban tahay.
Tirada ugu badan ee Ardayda Imtixaanka u fariistay ayaa wax ka barta Gobolka Bari, waxaa Dugsiyada Sare ee Gobolka Bari u fariistay 1,266 arday, halka Dugsi Dhexena ay u fariisten 2,568.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxbarashadda iyo taclinta sare ee dawlada Puntland, Dr. Maxamed Cali Faarax, ayaa Ardayda kula dardaarmay inay Imtixaanka si degan u galaan, ayna ku kalsoonaadan Aqoonta ay barteen.
Wuxuu intaas ku daray’’ Imtixaanka waxaa ardayga laga qaadaa labada marxaladood ee kala guurka ah, marka uu ka gudbayo marxallada dhexe ee uu 8 sano wax soo bartay, si loo qiimeeyo ardayga u gudbaya marxaladda Dugsiga Sare, sidoo kale waxaa imtixaankan u fariista ardayga dhammeeyey Dugsiga Sare oo u tallaabaya marxaladda Jaamacadda, waa laba marxaladood oo muhiim ah, loona baahan yahay in ardayga lagu sameeyo qiimayn dhab ah, taasoo uu qayb wayn ka yahay imtixaanka Shahaadiga ahi (Centralized Exam)’’.
Mar uu ka hadlayay Muhiimada Imtixaamka Shahaadiga ah ayaa wuxuu yiri’’ Imtixaanka Shahaadiga ahi kaalin mug leh ayuu ka qaataa tayada waxbarashada Puntland guud ahaan, wuxuu abuuray jawi tartan oo u dhexeeya ardayda u diyaargaroobaya imtixaanka, sidoo kale waxaa tartanka qayb wayn ka ah goobaha waxbarashada, maamulayaasha, macallimiinta, waalidiinta, madaxda gobollada.
Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta ka hadlay Munaasabada, ayaa Wasaaradda ku booriyay hawlaha muhiimka ah ee ay bulshada u hayaan.
Duqa Degmada Boosaaso Yaasiin Mire Maxamuud, ayaa sheegay in Wasaaradda Waxbarashadda iyo tacliinta sare ee Puntland ay tahay Wasaarad tayadeedu ay aad u sarayso, isla markaana hormar balaaran samaysay mudadii ay shaqaynaysay.
Ugu dambayntii wuxuu Wasiirku si rasmi ah u Daah-furay Imtixmaanka Shaadiga ah ee Puntland.
#IMTIXAANADA SHAHAADIGA AH PUNTLAND #IMTIXAANADA SOMALIA
IMTIXAANKII SHAHAADIGA AHAA EE PUNTLAND OO MAANTA LA BILAABAY SIXITAANKIISII
LIISKII NATIIJADA IMTIXAANADA EE TOBANKA ARDAY EE UGU SARAYSA OO SANNADKAN LA JOOJIYEY
VIDEO: UNICEF OFFICERS ANNOUNCE THAT THEY WILL ‘PROTEST THROUGH PROPER CHANNELS’ AGAINST EDUCATION MINISTER’S DIVERSION OF A CONTRACT, IN RETALIATION EDUCATION MINISTER ACCUSES UNICEF FOR MISAPPROPRIATION OF EDUCATION FUNDS
“We Know the result which is 92 [for] UNICEF out …Read More »
President Yoweri Museveni has ordered for closure of Makerere University …Read More »
Amoud Foundation provided logistical support which brought a visiting delegation …Read More »